अन्तर्वार्ता | 2019-03-25 11:15:00 |
पछिल्लो समय बैंकहरुको अवस्थालाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ?
पहिला जस्तो अवस्था त छैन तर तरलता अभावको समस्या अझै बाँकी रहेको छ । अहिले बैकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर घटिरहेको छ । ब्याजदर घटाउन बाणिज्य बैंकहरु पनि दबाबमा परेका छन् । बिकास बैंकहरुले पनि अहिले ब्याजदर घटाईरहेका छन् । यसले गर्दा बााणिज्य बैंकहरु पनि व्याजदर घटाउन दवावमा परेका हुुन । हामीले पनि सुनेका छौं, सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा पनि बैंकिड क्षेत्र लगानी योग्य रकमको अभाव झेलेका हुुन ।
नेपाली बैंकिङ क्षेत्र किन सधैंजसो लगानीयोग्य रकम अभावको समस्याले पिरोलिन्छ ?
बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुुनुको मुुल कारण पूंजीबृद्धि हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकरुलाई दुुई अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजीलाई बृद्धि गरेर आठ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउन निर्देशन दियो । त्यही समयमा भूकम्प पनि गयो । सोही कारण बित्तीय प्रणालीमा कर्जाको माग पनि बढ्यो । त्यो समयमा हकप्रद सेयरको लागि मात्र झण्डै दुुई सय अर्ब रुपैयाँ गयो । त्यो हाम्रो क्षमता भन्दा पनि बढी थियो । यसले,गर्दा पनि बैकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुुन गयो । तर अहिले बिस्तारै यो समस्या सम्हालिएर आईरहेको छ ।
अब यो समस्या पूर्णरुपमा समाधान भएको हो ?
होइन, यो समस्या रहिरहन्छ ।
यो समस्या समाधान गर्नको लागि राज्यले के गर्नुुपर्छ, यो समस्या दीर्घकालीनरुपमा समाधान हुुन्छ भन्ने कुुनै ठोस कुराहरु केही छन् ?
त्यस्तो केही छैन, राज्यलाई पनि गाह्रो छ । किनभने अहिले उपभोग बढिरहेको छ । तपाईंले हेर्नुभयो भने अहिले सरकारको बिदेशी बिनिमय सञ्चितीको अवस्थाले धेरै कुरा स्पष्ट पार्छ । हामीले भारतबट झण्डै ४०० मेगावाट बिजुुली आयात गरिरहेका छौं । त्यो बापत आईसी गईरहेको छ । यसको लागि हामीले डलर साटेर आईसी किनेका छौं । न्धनको पनि आयात भईरहेको छ । गाडीको आयात पनि बढिरहेको छ । हामीकहाँ बस्तुु तथा सेवाको आयात बढेको छ । यसले गर्दा पनि नेपालको भुक्तानी सन्तुुलन बिग्रिएको छ । व्यापार घाटा उच्चरुपमा बढेको छ । यसले गर्दा पनि नेपाली बैकिड क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको हो । इन्धनको लागि पनि देशबाट अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिरहेको छ । अहिले जे जति रकम आएको छ, त्यो रेमिटेन्स पनि कुुनै कुुनै माध्यमबाट बाहिरिने गरेको छ । नेपालको व्यापार सन्तुुलन बिग्रएर यस्तो भएको हो ।
निक्षेप तान्ने होडबाजी बैंकिड क्षेत्रमा अन्त्य भएको हो ?
अहिले बैंकहरुमा निक्षेप तान्ने होडवाजी अन्त्य भएको छ । बिगतमा बैकहरुबीच बढी ब्याज दिएर निक्षेप तान्ने होडवाजी चलेको थियो । तर अहिले त्यो अवस्था छैन । सबै बैकहरुबीचको ब्याजदर समान रहेको छ । यसले गर्दा निक्षेप तान्न कै लागि होडबाजी भएको छैन । व्यक्तिगतरुपमा भन्नुुहुन्छ भने मलाई यो ठीक लागेन किनकी, बजार भनेको सधैं प्रतिस्पर्धी हुुनुुपर्छ । सोही आधारमा ब्याजदर पनि प्रतिस्पर्धा कै आधारमा तय हुुनुुपर्छ । शुरुमा यस बारेमा नेपाल बैंकर एशोसियनसमा पनि कुरा उठेको थियो । यो प्रतिस्पर्धा अल्पकालीन अवस्थाको हो भन्ने हामीले सोचेका थियौं तर त्यो अवस्था लम्बियोे । मेरो व्यक्तिगत धारणाअनुुसार ब्याजदर निर्धारण गर्ने कुरा प्रतिस्पर्धी बजारमा भर पर्छ । हामीले बैंकर संघमा पनि भनेका थियौं । यो समस्या एकछिनको लागि मात्र हुन्छ होला भनेका थियौं । तर यो समस्या लम्बियो । यो समस्या आउनुुको मुुल कारण राष्ट्र बैकले संस्थागत निक्षेपमा यति प्रतिशत ब्याज भन्नुपथ्र्यो, त्यो अनुुसार कायम गर्न नसक्नेलाई कारबाही गर्नुुपथ्र्यो । तर राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्न सकेन, कारबाही गरेको भए यो हुुने थिएन ।
बैंकर र उद्योगीबीचको सम्बन्धमा तित्तता आएको भन्ने सुनिन्छ, यसलाई मान्न तयार हुुनुुहुन्छ ?
बैकर र उद्योगीबीच बुझाइमा फरकपन आएको भन्ने होईन । उद्योगीहरुले पेलेकै हो । सम्बन्धमा तित्तता आएको छैन । नेपाल बैकर एसोसियन र नेपाल उद्योग बाणिज्य संघका प्रतिनिधीहरुबीच बिभिन्न माध्यमद्वारा औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भएका थिए । यसमा बिशेष गरी तीन वटा बिषयमा छलफल भएको थियो । पहिलो ऋणको लागि आवश्यक कागजी प्रक्रियाको स्तरीकरण गर्नुुप¥यो । अर्को कर्जाको शुल्कहरु (फि एण्ड चार्ज) पनि बैंकहरु पिच्छे फरक फरक भयो । यसलाई समान बनाउने भन्ने बिषयमा छलफल भएको हो । ब्याजदरको कुरामा भने उद्योगीहरु पनि फ्रि मार्केट ईकोनोमीबाट हुनुु पर्छ भन्ने थियो । यसको बिषयमा भएको छलफलमा उद्योगहीरुले बेस रेट (आधार ब्याजदर) र प्रिमियममा क्याप गर्नुुपर्छ भन्ने कुरा उठको थियो । यस्तो हुुनुु हुँदैन । जोखिम मोल्ने भएको बैकहरुले हो । उनिहरुले जोखिम मोल्ने भए उनीहरुले नै बैक चलाए भई हाल्यो ।
अहिले बैंकहरु बीच आधार ब्याजदर फरक छ ?
२८ वटा बाणिज्य बैंकहरुको आधार ब्याजदर फरक छ । जुुन बैंकहरुमा आधार ब्याजदर कम छ, त्यस्तो बैंकहरुमा उद्योगीहरु जानुु पर्यो । उद्योगीहरुले बैंक चिन्न सकेनन्, त्यही हो । लगानी गर्ने सबै ब्याजदर फरक छ । प्रत्येक क्वार्टरमा हामीले ब्यालेन्स सिट सार्वजनिक गर्छौं , त्यही ब्यालेन्स सिटको आधारमा कम आधार ब्याजदर भएको बैंकहरुमा उद्योगीहरु जानुु पर्थ्यो ।
हिमालयन बैंकको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो प्रगति अहिले राम्रो रहेको छ । अहिले हिमालयन बैंकको बिषयमा भन्नुुपर्दा, सबै कुरा मिलेर आईरहेको छ । सेकेन्ड क्वार्टरमा पनि प्रगति राम्रो रहेको छ । थर्ड क्वार्टरमा पनि राम्रै हुन्छ । मेलम्चीको काउन्टर ग्यारेन्टीको बिषय पनि समाधान हुुँदै गएको छ । चिनियाँ अदालतले हाम्रै पक्षमा फैसला गरेको छ । आशा छ त्यो मुुद्दाको टुुंगो छिटै लाग्छ । त्यसमा हिमालयन बैंकको ६६ करोड रुपैयाँ फसेको छ । अहिले सम्मको अवस्था हेर्दा त्यो मुुद्दाको टुुंगो छिटै लाग्दै छ, त्यो मुुद्धा फैसला बैंक कै पक्षमा हुन्छ ।
हिमालयन बैंकले बिदेशमा शाखा खोल्ने योजना के छ ?
हामीले मलेसियामा सम्पर्क कार्यालय खोलेको हो । बिदेशमा शाखा खोल्न सकिन्न । त्यहाँ शाखा खोलेर फाईदा नै छैन । बिदेशमा शाखा खोल्न जुन पूँजी लगानी गर्नपर्छ । त्यो लगानी यहीँ हाल्दा फाईदा हुन्छ ।
हिमालयन बैंक पछिल्लो समय म्याक्स मनीसँंगको लफडामा पनि फस्यो नि ?
यसमा गल्ती हिमालयन बैंकको होईन । म्याक्स मनीको हो । म्याक्स मनीको समस्या पनि टुुंगो लाग्छ । यसमा हाम्रो एउटा पार्टनरले बदमासी गर्न खोज्यो । तर हामीले सबै पक्षलाई घटनाको वास्तबिकता बुझायौं । यहाँको नेपाल राष्ट्र बैंक, पराराष्ट्र मन्त्रालय, मलेसियाको केन्द्रिय बैंक सबैसँंग समन्वय गर्यौं । मलाई लाग्छ, अब एक दुुई महिनामा त्यो पैसा फिर्ता आउँछ ।
उद्योगहीहरुलाई के भन्नुु हुन्छ ? जुुन कुराहरुले उद्योगीहरु खुुसी होऊन ।
उद्योगहीरु सबैले पारदर्शी भएर काम गर्नुुहोस, राज्यलाई तिनुुपर्ने सबै करहरु नियमसंगतरुपमा तिर्नुुहोस् । दुुई दुुई वटा ब्यालेन्स नबनाउनुस् । जे छ त्यही अनुसारको बिवरण सार्वजनिक गर्नुुहोस् । जति कर तिर्नु पर्छ । त्यो अनुुरुप कर तिर्नुुहोस् । कर नछल्नुुहोस् । अहिले ठूला उद्योगहरुमा त्यो समस्या खासै छैन । स– साना उद्योगहरुमा दुुई दुुई वटा ब्यालेन्स सिट नदेखानुुहोस । नगदरहित कारोबार गर्नुुहोस् । कार्डको प्रयोग गर्नुुहोस् । कार्डबाट कारोबार गर्दा कारोबार कम गरेको बिवरण देखाउन मिल्दैन । सबै कुराहरु पारदर्शी हुन्छन् । तर उद्योगी व्यवसायीहरु त्यसो गर्न चाहँदैनन् । उनीहरु सकेसम्म आफ्ना्े कारोबार कम देखाउन चाहान्छन् । वास्तविक कारोबार लुकाउन चाहन्छन् । त्यसो नर्गनुुहोस् पारदर्शी भएको उद्योग व्यापार चलाउनुुहोस् ।
कुुनै पनि बिवादहरु छताछुल्ल गरेर लविङ गर्नुु हुँदैन । सबै उद्योगीहरु संस्थागत सुशासनको दायरामा आउनुु पर्यो । आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउनुु पर्यो । उहाँहरुले पनि आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई रेटिङ गर्नुुपर्यो । यसो गर्दा कर्जाको ब्याज कम हुुन्छ । सबै कुराको दोष बैंकहरुलाई मात्र लगाएर हुुँदैन ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग गरिएको कुराकानि बजेटको छमहिने अवधि पार भएको छ । कस्तो...
तपाईंले नेपाली अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । यो दुई वर्षमा...
तपाईको पति कहिलेदेखि माओवादीले अपहरण गरी हत्या गरेका हुन् ? २०६२ साल वैशाख १६ गते माओवादी...
नेकपाको आन्तरिक जीवनले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्छ । बहुप्रतीक्षित केन्द्रीय...
काठमाडौं मंसिर, १– निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग...
काठमाडौं जेठ, १४– सात प्रदेशमा १४ हजार ६ सय ७२ कर्मचारी आवश्यक रहेको विवरण संघीय मामिला तथा...
काठमाडौं जेठ, १३– सार्वजनिक लेखा समितिमा तपाईं के भन्नुभएको थियो कुलमान घिसिङसँग के...
काठमाडौं जेठ, ६– डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल जलस्रोत विज्ञ हुन् । उनी नेपाल सरकारका...
काठमाडौं वैशाख, ३०– नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादीबीच एकता भइरहँदा तपाईं लगायत नयाँ शक्तिका...